होसियार ! कुखुराको मासु २ सय ५० भन्दा बढिमा नबेच्नुस ! कारबाहीमा पर्नुहोला – PathivaraOnline
Home > बिजनेस > होसियार ! कुखुराको मासु २ सय ५० भन्दा बढिमा नबेच्नुस ! कारबाहीमा पर्नुहोला
होसियार ! कुखुराको मासु २ सय ५० भन्दा बढिमा नबेच्नुस ! कारबाहीमा पर्नुहोला
admin May 15, 2020 बिजनेस	0
देशमा कोरोना भाईरस संक्रमणले त्रास बनाईरहेको बेला मकवानपुरमा कुखुराको मासुको मुल्यवृद्धि गरेको भन्दै उपभोक्ताहरुले यसको विरोध गरेकाछन्, ।
लकडाउनको मार खेपिरहेका गरिब मजदुर र विपन्न परिवारहरुले खान नपाउने यो अवस्थामा मकवानपुरमा भने कुखुराको मासुको मुल्य आफुखुसी वृद्धि गरेर कालो बजारी गर्न खोजेको भन्दै आम उपभोक्ताहरुले दुखेसो पोखेकाहुन।
बुधबार देखि कुखुराको मासु प्रति किलो २ सय पचास भन्दा बढि कोही कसैले लिएको पाईएमा कानुन बमोजिम कार्बाहीहुने प्रशासनले बताएको छ । बुधबार देखि हेटौडामा बिज्ञबाट कडा रुपमा अनुगमन गर्ने समेत हेटौडा उपमहानगरपालीकाका उपमेयर मिना लामाले बताउनु भयो ।
यो समुहले केही दिनमा कृषकका समस्याहरु बुझेर मुल्यबृद्धि गर्नुपर्ने समस्या हो भने त्यतातिर जाने समेत उपमेयर लामाले बताउनु भयो । सिधाकुराबाट